के लगातार कन्ट्याक्ट लेन्स लगाउनु सुरक्षित हुन्छ ?
तपाईंलाई यो कम्तिमा पनि छिटो गरिने शल्यक्रियाबाट कुनै रोग लाग्ने सम्भावना छ - मलाई लाग्छ सबै प्रयोग गरिने उपकरणहरु - सुई, चिरफारमा प्रयोग गरिने सानो चक्कु आदि सफा/ नयाँ हो - म चिन्तित हुनुपर्छ ? मेरो २ ओटा धेरै सानो कपाल प्रत्यारोपणहरू गरिएका थिए र दुबै शल्यक्रियाहरू पूर्णतया: सफा र धेरै आधुनिक थिए - म प्रयोग गरिएका उपकरणहरूको सर-सफाईमा मात्रै चिन्तित छु - के मैले चिन्ता गर्नुपर्छ ?
धेरै प्राकृतिक रङ्को कारणले मेरो गोप्य भाग कालो भएको छ । म यसलाई सामान्य रङको देखिने बनाउन चाहन्छु
मेरो नङ्हरू कडा र भाँचिने खालको छ र विशेषगरी खुट्टाको नङ् ठूटो खालको छ । म कसरी यसलाई मिलाउन सक्छु ?
तपाईंको अनुहारमा उमेरको दागबाट कसरी छुटकारा पाउनु हुन्छ ?
मेरो १४ वर्षकी छोरीको मुख नजिकको गालाको छेउमा मोटो मासुको डल्लो साँच्चिकै बाहिरबाट देखिन्छ । मलाई लाग्छ तिनीहरूलाई उल्टो गालाको खोपिल्टो वा डिम्पल भनिन्छ । उनी मुश्किलले तिनीहरूसँग आफू धेरै सजग छिन् र हामीले पहिला बच्चामा यस्तो देखेका थिएनौं । अथवा त्यहाँ केहि अरु अन्तर्निहित समस्या छ
गर्मीको समयमा ऊनबाट बनेको सिरक प्रयोग गर्दा कपाल झर्ने हुनसक्छ ?
म २२ वर्ष उमेर भएको कतरु प्रशान्त हुँ । हाल मैले मेरो टाउकोमा सेतो कपाल देखेको छु र म यसको कारण जान्न चाहन्छु ? यो समस्यालाई कसरी रोक्न सकिएला ? मलाई कुन भिटामिन वा प्रोटीनको कमजोरीको कारण यस्तो भएको हो र सुधारको लागि के खानु पर्ला भनेर बताइ दिनुहोस् ?
कसरी पेटमा भएको बोसो घटाउन सकिन्छ ?
कृपया तौल बढाउनको लागि उचित शाकाहारी आहार तालिका मार्गनिर्देशन दिनुहोस्